‘यस वर्ष सर्वाेकृष्ट कर्मचारी नै भेटिएनन्’ « प्रशासन
निजामती सेवा दिवसका अवसरमा दिइने सर्वाेकृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि यस वर्ष कर्मचारी छनोट भएनन् । के कारणले सर्वाेकृष्ट कर्मचारी छनोट हुन सकेनन् ? निजामती सेवा दिवसका दिन उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई दिइने अन्य पुरस्कारहरुका सन्दर्भमा पनि धेरै कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि कायमै देखिन्छ । यतिसम्मकी पुरस्कार पाउने व्यक्ति समेत स्वयं गौरव गर्न सकिरहेको देखिदैन । स साना कुराहरु पनि फेसबुकमा पोष्ट गरिहाल्ने सन्दर्भमा यत्रो ठूलो पुरस्कारप्राप्त गर्दा पनि गौरवका साथ लेख्न नसक्नुले पनि भन्न सकिन्छ पुरस्कृत कर्मचारी पुरस्कार पाएकोमा गौरव गर्न सकिरहेको छैन किन ? यसको कारण र समाधानबारे सर्वाेकृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार समिति अध्यक्षसमेत रहेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग प्रशासन डट कमका सिद्धराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।
यस वर्ष निजामती कर्मचारीमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै छनोट हुन सकेनन्, यसले कर्मचारीको क्षमतामा नै प्रश्नचिह्न उठाएको हो त ?
शैद्धान्तिक रूपमा यो भन्न सकिन्छ । यहाँहरूलाई थाहा नै होला, धेरै वर्ष सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिइएन । बीचमा एक/दुई जनालाई दिइयो ।
पहिलोपटक सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने व्यक्ति त विवादित बने । पुरस्कार पाएको केही समयपछि लोकसेवा परीक्षामा गडबडी गरेकोमा उहाँको नाम आयो । यसले चयन पनि राम्रो भएन भन्ने देखायो । त्यसकारण ‘लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’ जस्तै रिटायर्ड हुने बेलामा दिए मात्र पुरस्कारको गरिमा बच्छ जस्तो लाग्छ । अन्यथा आज सर्वाेकृष्ट पुरस्कार पाएको व्यक्ति एक/दुई वर्षपछि कुनै कारबाहीमा परे भने पुरस्कारकै अर्थ नहुने अवस्था हुन सक्छ । यो धेरै ठूलो पुरस्कार हो । त्यसकारण शैद्धान्तिक रूपले हामी कहाँ सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै छैनन् की जस्तो भयो ।
अर्काे, हाम्रो चयन पनि राम्रो भएन । जो सिफारिस भयो त्यहीभित्रबाट छानिने हो । सिफारिस सचिव वा विभागीय प्रमुखले गर्छन् । सही व्यक्तिलाई सिफारिस नहुँदा समस्या आउँछ । पोहोर साल मात्रै तीन जनाको सिफारिस आयो । तर, पुरस्कार त एक जनालाई मात्र दिनुपर्ने हो नि त । पछि अहिलेको अर्थसचिव शान्तबहादुर सुवेदीले पुरस्कार पाउनुभयो ।
पुरस्कारका लागि कर्मचारी छान्ने क्राइट एरिया नै बन्न सकेन । कोही न कोही त होलान् नि असल र लामो सेवा दिएका । आफू लाइटमा आउन नखोज्ने र आफ्नै किसिमले काम गर्ने इमान्दार कर्मचारी थुप्रै छन् ।
त्यस्तो हुँदा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको मनोवल खस्कने र पुरस्कारको जुन गौरव र महत्व छ त्यो त घट्दै जाने भयो नि
पक्कै हो । पछि केही सुधार हुँदै गएको छ । पहिले–पहिले कस्तो हुन्थ्यो भने जो त्यो छनोट समितिमा बस्छ उहाँकै पिएहरूले पाउने, उहाँकै ड्राइभरले पाउने । यसले पुरस्कारको अर्थै थिएन । पछिल्ला वर्षमा सत्प्रतिशत नसच्चिए पनि ५० प्रतिशत जस्तो सच्चिएको छ । बाहिरका पनि केही छनोटमा परेका छन् । त्यो बोर्डमा बस्नेभन्दा बाहिर पनि जाने यो सन्दर्भ देखिएको छ । तैपनि जति सुधार हुनुपर्ने हो यो भएको छैन । त्यसैले शैद्धान्तिक रूपमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छैनन् की जस्तो नै भयो ।
अहिलेसम्म भएका छनोट पनि राम्रो भएन । त्यसैले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलार्य डिमोटिभेट नगरोस् भन्ने भाव पैदा गर्न पुरस्कारका लागि दुई क्राइट एरिया बनायौं । पुरस्कारका लागि छनोट हुने व्यक्ति विभागमा मात्र होइन, बाहिरी मूल्यांकनकर्ताबाट पनि त्यो ‘राम्रो’ हुनु आवश्यक छ । त्यो कही न कही रिफ्लेक्ट भइराखेको हुन्छ जनताको प्रतिक्रियामा अथवा कोही मिडियामा आएको हुन्छ ।
दोस्रो यो ‘लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’का रूपमा यो पछि नबिग्रियोस भनेर त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनु पर्छ जो रिटायर्डको संघारमा पुगेको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई दियो भने उसलाई गौरव बोध पनि हुन्छ ।
यहाँले भनेजस्तै छनौट प्रक्रिया नै गलत भएपछि कसरी सही व्यक्ति पुरस्कृत हुन सक्नु त हैन ?
ठिकै भन्नुभयो । मैले अघि भने नि छनोटको जुन प्रक्रिया छ सर्वोत्कृष्टका लागि अलि छनोटको प्रक्रिया फरक हुनुपर्छ । सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार दिने समिति चाहीँ अलग छ । यसको छनोट समितिको अध्यक्ष म नै हो । उहाँहरूले सिफारिस भएको सूचि बनेपछि मलाई बोलाउने हो । उहाँहरूले नबोलाएपछि मैले के ठान्छु भने यो वर्ष कसैको सिफारिस छैन । २२ गते अगाडि नै बोलाइसक्नुपर्यो । निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै बोलाउनु पर्छ । विज्ञ सेवा लिन मेरो अध्यक्षतामा मुख्य सचिव र पूर्वकर्मचारीको समिति छ । त्यही समितिले छनोट गर्ने हो । लास्ट आवरमा बोलाइदिन्छन् । दुइटा उपायमध्ये एउटा उपाय भयो । एउटा उपाय सबै काम छैन भनेर रिजेक्ट गरेर हिँड्ने अर्को भएकामध्ये यो ठिक हो भनेर गरिदिने । अरु छनोट प्रक्रिया सिफारिसको प्रक्रिया उही छन् । त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसको थप काइट क्राइट एरिया तोक्नुपर्छ । मूल्याङ्कनका आधार आन्तरिक र बाह्य दुइटै हुनुपर्छ । त्योबाट सेलेक्ट भएर आएको व्यक्ति फेरि त्यसको इज्जत बचाओस् भन्न रिटायर्ड हुन खोजेको व्यक्तिलाई दिनु पर्छ ।
पनि शक्ति र शासनकेन्द्रको वरीपरीबाट मात्रै छनौट भएका देखिन्छन् स्वतन्त्र र मोफसलमा काम गर्ने कर्मचारी कर्मचारी नै होइन, कि मोफसलले कामै गर्दैनन् भन्ने हो ?
त्यो त मैले अघि पनि संकेत गरे । अहिले अझ सुधार भएको छ । यो पल्टको मैले हेरेको छैन, बाहिरको कति पर्नुभएको छ । यसअघि त पर्दै पर्दैन थियो । जो छनोट समितिमा हुनुहुन्थ्यो त्यही समितिको नजिकका । एक चोटी त छनोट समितिको अध्यक्षले नै आफ्नो नाम सिफारिस गर्नुभयो, जुन रिजेक्ट भयो । यो कुरा सुन्नु भएकै होला । त्यसपछि उहाँकै पिए । कानुन सचिवको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पिए । यस्तो हुँदाहुँदै त्यो सबै यस्तो भयो की बाहिरै गएन । बाहिर नगएपछि यो त अर्थ भएन । त्यो हेर्दा त सुधार भएको छ ।
उत्कृष्ठ पुरस्कारको सन्दर्भमा छनोट समितिको असक्षमता, सिफारिस गर्ने कार्यालय प्रमुखको गल्ति कि लाएक कर्मचारी नै नभएर हो छनौट हुन नसकेको ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा मूल्यांकन गर्दा आफु नजिकको व्यक्तिबाट प्रभावित हुनुभएन । ‘फियर इभ्यालुयसन’ भयो भने यो सुध्रिन्छ । सिफारिस गर्नेले नै सिफारिस गरिदिँदैन त्यहीबाट सहि छान्ने हो भने भइहाल्छ । विभिन्न मन्त्रालयले आफू मातहतका निकाय हेर्नुपर्यो । मोफसलका पनि हेर्नुपर्यो । केन्द्रका मात्रै हेर्नु भएन । सबैलाई सामूहिक रूपमा न्यायिक रूपमा हेरेर सिफारिस गरिनुपर्यो । एउटै कुरा हाम्रो चुकेको के हो भने एकदम तथ्यगत रूपमा उसले के गरेर पुरस्कार पाएको छ लेख्नु पर्यो ।
भनेको अहिलेपनि सिफारिस गर्ने व्यक्तिले जसलाइ मनलाग्यो व्यक्तिगत तजबिजले दिनसक्ने अवस्था छ हैन त ?
छ । त्यो भद्रगोले । फ्याक्ट नै लेख्नुपर्यो यो काम गर्यो भन्ने । सिफारिस गर्नुको कारण ‘उत्कृष्ट कार्यसम्पादन स्तर’ लेख्ने चलन छ । यसले सिफारिस हुने व्यक्तिले गरेको काम स्पष्ट बुझिँदैन । के गर्यो त ? फ्याक्टमा आधारित यो–यो काम गर्यो, त्यसकारणले योग्य भयो लेखिनुपर्छ । त्यो भयो भने निर्णय गर्दा पनि त्योसहित प्रकाशित गर्न सजिलो हुन्छ ।
Tags : निजामती सेवा दिवस लोक सेवा सर्वाेकृष्ट कर्मचारी